बडादशैँ आयो कसरी बनाउने त मासुको परिकार? जानी राखौं। - Malayakhabar
होम पेज फिचर बडादशैँ आयो कसरी बनाउने त मासुको परिकार? जानी राखौं।
बडादशैँ आयो कसरी बनाउने त मासुको परिकार? जानी राखौं।
काठमाडौंः स्वादिलो खाना खान मन मात्र भएर पनि हुँदैन। खानालाई स्वादिलो बनाएर पकाउने कला पनि आवश्यक हुन्छ। अझ चाडपर्वको समयमा घरमा विभिन्न खानेकुरा पाक्ने गर्छन्। मासु त भान्सामा छुट्दै छुट्दैन। दसैंको मुख्य परिकारनै मासु हो भन्दा फरक पर्दैन।
अन्य दिनमा जति नै मासु खाए पनि दसैंको समयमा मासु खानुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ। यसले दसैंको रमाइलो वातावरणमा झनै उत्साह थपिदिन्छ। अन्य समय भन्दा दशैंको बेला मासुको परिकार धेरै बनाउन सकिन्छ। जस्तै पकवा, मासुको रस, ग्रेभी मासु, भुटन, चिकेन पोलेको, छोयला, साधेको कुखुराको मासु। हामीले केही परिकार बनाउने तरिकाबारे यहाँ चर्चा गर्दैछौं।
१ पकवा कवाव :
२ मासुको रस :
३ ग्रेभी मासु :
४ भुटनररक्ती :
५ चिकेन पोलेको :
६ छोयला :
७ साधेको कुखुराको मासु :
८ खसीको खुट्टाको सुप :
मासुका यी परिकारहरु तयार पार्ने विधि शारदा ज्ञवालीको सहयोगमा तयार पारिएको हो। उनी डेभलेप्मेनट कन्सल्टेन्ट हुन् तर उनको रुची विभिन्न परिकार बनाउनु पनि हो। ज्ञवाली ट्रेडिसनल फुडको प्रमोटर पनि हुन्। उनले हालै ‘नेपाली होम कुकिङ अफ हेल्दी लिभिङ’ नामक किताब पनि लेखेकी छन्। जसमा विभिन्न नेपाली खानाका परिकारहरु बारे उल्लेख गरिएको छ।
अघिल्लो लेख अभिनेत्री तब्बूले भनिन्- अजयका कारण अविवाहित बसेको हुँ।
पछिल्लो लेख अहिले चाडबाडको बेला दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको परिवारलाई सरकारले राहत दिने।